Daawo sawirada sida madaxweye Farmaajo loogu soo dhaweeyey Nairobi - Caasimada Online
Home Warar Daawo sawirada sida madaxweye Farmaajo loogu soo dhaweeyey Nairobi
Daawo sawirada sida madaxweye Farmaajo loogu soo dhaweeyey Nairobi
Nairobi (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya oo uu manta booqasho rasmi ah ku tagay.
Madaxweynaha ayaa Magaalada Nairobi uga qeybgeli doono Shirka ay yeelanayaan madaxda IGAD kaasoo looga hadli doono qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku sugan.
Madaxweynaha ayaa Nairobi joogi doono muddo 3 maalin ah sida uu qorshaha yahay, waxaana sidoo kale la filayaa inuu halkaa kulamo iyo wadahadao kula yeesho madaweynaha Kenya Uhura Kenyatta oo booqasho aan loo fasixin dhawaan ku tagay Dhoobley.
Madaxweynaha waxaa garoonka kusoo dhaweeyey hogaamiyaha aqbaliyadda Baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale, Wasiirka Arrimaha dibadda Amina Maxamed iyo mas’uuliyiiin ka tirsan dowladda Kenya, waxaana loo xakeeyey madaxtooyada Kenya.
Wixii warar ah ee kusoo kordha booqashada madaxweynaha ee Kenya waan idiin soo gudbin doonaa Inshaa Allaah